Maxkamda ciidamada qalabka sida oo maanta riday xukun dil toogasho ah – Radio
December 29, 2018	41	Like
Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta oo ay tahay 29-ka bisha 12-aad 2018 xukun dil toogasho ah ku fulisay Maxamed Aadan Cali Booroow oo horay maxkamadu ay sheegtay in uu sheekh Caan ahaa dil ugu geystay magaalada Baydhabo.
Maxamed Aadan Cali Booroow ayay maxkamdu sheegtay in 15-kii bishii 6aad ee sanadkii 2017 uu masjid ku yaala magaalada Baydhabo ku dhex dilay sheekh Madeer Madgaab Caliyow oo kamid culumada ugu caansan deegaanada Koonfur galbeed.
Gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo fagaare uu ka dhacayay dilka toogashada ah ka hadlayay ayaa sheegay in xukunsane Maxamed Aadan Barrow uu kamid ahaa ururka Alshabaab afkiisana uu ka qirtay in uu dilay sheekh Madeer.
Mudooyinkii ugu dambeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ridaysay xukuno kala duwan oo isugu jira dil toogasho ah iyo xabsi daa”in iyadoona ay xusid mudan tahay in dilka maanta uu ka dhacay fagaare ku yaala magaalada Baydhabo.
Halbeegga siyaasadda Puntland ee maanta iyo doorashada 2019
Puntland ayaa isku diyaarinaysa doorasho aad loo sugayo taas oo la filayo in ay dhacdo ...